Izindaba - Isikhungo sokushaja i-Wenchuan County Yanmenguan sisebenza
Isiteshi sokushaja i-AC
Isiteshi sokushaja se-DC
Isikhungo sokushaja i-Wenchuan County Yanmenguan sisebenza
NgoSepthemba 1, 2021, isiteshi sokushaja eYanmenguan Comprehensive Service Area yaseWenchuan County saqala ukusebenza, okuyisiteshi sokuqala sokushaja esakhiwa futhi saqala ukusebenza yi-Aba Power Supply Company of State Grid yaseChina. Isiteshi sokushaja sinendawo yokushaja engu-5 DC, ngasinye sihlonyiswe ngezibhamu ezi-2 zokushaja ngamandla alinganisiwe okukhipha angu-120kW (ukukhishwa okungu-60kW kwesibhamu ngasinye), onganikeza insizakalo yokushaja yezimoto zikagesi eziyishumi ngasikhathi sinye. Indawo yokushaja esheshayo yonke yonke ikhiqizwa yiSichuan Wei Yu Group （Weeyu） ngendlela ye-ODM ye-Aba Power Supply Company of State Grid Corporation yaseChina.
"Ingashaja ama-kWh amabili ngomzuzu, futhi kuthatha imizuzu engama-25 kuphela ukuthi imoto ishaje ama-50 kWh, okusasebenza kahle kakhulu." UMnu. Deng Chuanjiang, iphini lemenenja jikelele ye-State Grid Aba Power Supply Company, wethule ukuthi ukuqedwa nokusebenza kweziteshi zokushaja endaweni yaseYanmenguan Comprehensive service kuqede umlando wokungabi bikho kwesikhungo seziteshi ezishaja ngokushesha e-Aba Prefecture, futhi kwaxazululwa ngempumelelo inkinga ukushaja okusheshayo kwabanikazi bamandla amasha.
Kubalulekile ukusho ukuthi iWenchuan County isendaweni ephakeme kakhulu enobude obungamamitha ayi-3160. Ukwakhiwa kweziteshi zokushaja zenqwaba ye-dc endaweni ephakeme kangako ngaphandle komthelela omkhulu ejubaneni lokushaja kuyaqhubeka kufakazela ukuthi ugesi we-NIO ungumnikazi wezobuchwepheshe obuhamba phambili embonini kanye nokulawulwa kwekhwalithi.
Kusukela ngoMeyi kulo nyaka, i-State Grid yaseChina yakha ngokulandelana izinqwaba zokushaja e-Aba Prefecture futhi yafinyelela ekubambisaneni okujulile neSichuan Weiyu Electric Co., LTD. Njengamanje, ilogo encane eyisishiyagalolunye yeziteshi zokushaja i-wenchuan, izingoma zokupaka izingoma zinokwakhiwa, zinamandla okuqoqa ngokushesha futhi iziteshi zokushaja zehhotela ze-jiuzhaigou Hilton ziyakhiwa, ezakhiwa ngoSepthemba kulindeleke ukuthi ziqale ukusebenza, i-maoxian inqwaba yokushaja inqwaba nayo izosheshisa ukwakhiwa, ngemuva kokuphothulwa kokushaja kusuka ku-chengdu kuya ku-jiuzhaigou kuzokwenziwa ngokuphelele.
UMnu. Deng Chuanjiang uthe ngemuva kokuphothulwa kwedolobha, isifunda nezindawo ezibukekayo, izindawo ezinhle ezibiza ukwakhiwa kwewebhusayithi, inkampani kagesi iGrid Aba Power Supply izosuselwa esimweni sangempela ukuqinisa indawo yokushaja, futhi ilwele ukuhlela ukukhokhiswa esiteshini esingamakhilomitha angama-70 kuya kwangama-80, ukuxazulula ngempumelelo inkinga yokushaja imoto entsha yamandla.
Enqubeni yokushaja, umnikazi udinga ukuskena ikhodi ukulanda i-APP futhi asebenze ngokuya ngamathiphu ku-APP nokushaja inqwaba ukuqedela umsebenzi wokushaja. Ngokuvamile, kubiza cishe ama-yuan angama-60 kuye kwangama-70 ukugcwala ngama-kilowatt-amahora angu-50 kagesi. Ingagijima amakhilomitha angama-400 kuye kwangama-500, futhi ingu-0.1 kuya ku-0.2 yuan kuphela ngekhilomitha. Uma kuqhathaniswa nezindleko ezingaphezu kwama-yuan ama-0,6 ngekhilomitha lezimoto ezijwayelekile zikaphethiloli, izimoto zamandla amasha zingonga cishe u-0.5 yuan ngekhilomitha.
Isikhathi Iposi: Sep-07-2021
ITianyu Science Technology Park, No.1 Tumenjiang Road, Deyang City, Sichuan, China
I-Ev House, Ukushaja Iziteshi Ev, Isiteshi se-Ev Charge, Iziteshi ze-Ev Charge, Amashaja ezimoto zikagesi, Isiteshi sokushaja i-Ev,